Tag: akhrin | Martech Zone
Cinwaanka macluumaadkan ayaa runtii ah Qaaciddada Sirta ee Wadaagga Fiican ee Fiiruska. Waan jeclahay infographic-ka laakiin ma ahi taageere magaca… marka hore, ma aaminsani inay jirto qaacido. Marka xigta, ma aaminsani inay jirto qayb dhammaystiran. Waxaan aaminsanahay inay jiraan arrimo is biirsaday iyo dhacdooyin u horseedaya nuxur weyn in la wadaago. Qaar ka mid ah waa nasiib caadi ah sida ay u gasho midigta horteeda
Dadka badankood ma aqriyaan shabakadaha sida caadiga ah. Dadku waxay iskaan u sameeyaan maqaalka kor ilaa hoose waxayna qabtaan cinwaannada, rasaasta, sawirrada, ereyada muhiimka ah iyo weedhaha ay daawanayaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad hagaajiso habka ay akhristayaashu u cunaan waxyaabahaaga, waxaa jira siyaabo lagu wanaajiyo qaabkaaga. Ku dheji qoraalka mugdiga ah asalka cad. Midabada kale ee jilicsan ayaa laga yaabaa inay shaqeeyaan, laakiin kala duwanaanshuhu waa fure, iyadoo xarfaha ay ka madow yihiin asalka. Isku day ka weyn,